Coronavirus QR Code - COVID-19 ကြေငြာချက်ပုံစံ• Pageloot
သင်၏စီးပွားရေးကို COVID-19 ကြေငြာချက်ပုံစံ QR Code ဖြင့်လုံခြုံစွာထားပါ
✅✅ည့်သည်များသည်အဆက်အသွယ်ခြေရာကောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ခြင်း QR Code ပုံစံကိုဖြည့်နိုင်သည်။
✅ဤအရာသည်သင်၏စီးပွားရေးတွင် Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဤသည်ကိုအခြေခံသည်အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့လမ်းညွှန်။ သင်၏ privacy နှင့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကိုရပ်တန့်ရန်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအားကူညီရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏တည်နေရာတွင်သင့် visitors ည့်သည်များလုံခြုံမှုရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ ဆက်လုပ်ပါ COVID-19 အခမဲ့ဖြစ်သည်.
ကျန်းမာရေး QR Code ပုံစံသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များနှင့် guests ည့်သည်များအတွက်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
သင်၏ပြပါ COVID-19 အခမဲ့ဇုန် ဖောက်သည်များ QR Code ။ သူတို့ကိုသင်ဂရုစိုက်ကြောင်းသိစေပါ
Coronavirus Health QR Code ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်သူလာလည်သလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ဤသည် Covid-19 ၏ပြန့်ပွားကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။
Covid-19 QR Code ကိုစကင်ဖတ်ပါ
သင်၏ visitors ည့်သည်များသည်စမတ်ဖုန်းကင်မရာဖြင့် QR Code ကိုစကင်ဖတ်နိုင်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံကိုသူတို့ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သူတို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်။
Coronavirus Health QR Code ကိုဖန်တီးပါ
coronavirus ကြေငြာစာရွက် QR Code ဆိုတာဘာလဲ။
Covid-19 QR ကုဒ်နှင့်ပတ်သက်လျှင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
#1 COVID-19 ခြေရာခံပုံစံ QR Code
ဤ QR Code ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင့်ရဲ့ guests ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပါ.
ဤအရာသည်အတည်ပြုပြီးသော Covid-19 အမှုတစ်ခုအတွင်းသင်၏တည်နေရာ၌ရှိနေသောအခြားသူများကိုသတိပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပုံစံကိုဖြည့်ပြီးနောက် visitors ည့်သည်များသည်သင်၏တည်နေရာကိုကြည့်ရှုရန်သူတို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ခွင့်ပြုချက်မျက်နှာပြင်ရရှိလိမ့်မည်။
#2 COVID-19 ပြ QR Code ကိုပြသ
ဤပုံစံတွင်အကြောင်းပြချက် (၂) ခုရှိသည်။
V ည့်သည်များအနေဖြင့် COVID-19 လက္ခဏာများသို့မဟုတ်သမိုင်းကြောင်းအတွက်လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
COVID-19 tracing ပုံစံကိုရယူပါ
သွားကုဆရာဝန်သည်လူနာများအတွက်အန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန် Covid-19 ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ပုံစံကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာကိုလည်ပတ်ခဲ့သူတစ် ဦး ရောဂါကူးစက်ခံရပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ သင်၏တည်နေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး သည် coronavirus ကူးစက်ခံရသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကသင့်တည်နေရာကိုသူတို့လာရောက်သည့်အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုချက်ချင်းရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လာရောက်လည်ပတ်ချိန်တွင်ဖော်ထုတ်ခံရဖွယ်ရှိသောအခြားလူများအားဆက်သွယ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
coronavirus QR Code ပုံစံဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
#1 Covid-19 QR Code ကိုဖန်တီးပါ
QR Code တစ်ခုဖန်တီးရန်အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ။ သင့်ရဲ့လိုဂိုနှင့် CTA ကိုထည့်ပါ၊ ၎င်းကို visitors ည့်သည်များအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေမည်။
#2 သင်၏ QR Code ကိုစမ်းသပ်ပါ
QR Code ကိုသင်၏နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ ဂူဂဲလ်ပုံစံများ။ သင့်အတွက်အလျင်အမြန်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်ပုံစံများကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ QR Code သည်aကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ QR Code Scanner Tool.
#3 သင်၏ QR Code ကိုပုံနှိပ်ပါ
သင်၏ entry point များမတိုင်မီ QR Code ကိုသင်ထည့်လိုသည်။ ဤနည်းဖြင့်သူတို့သည်မဝင်ခင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းလူတိုင်းတွေ့မြင်ရမည်။
#4 Q ည့်သည်များသည်သင်၏ QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်
သင်၏ visitors ည့်သည်များသည်ပုံစံကိုဖြည့်ရန်တစ်မိနစ်ကျော်ကြာမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက် overhead နှင့် time ကိုသက်သာစေသည်။
သင်၏တည်နေရာထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသူအားလုံး၏အချက်အလက်များကိုယခုသင်ရရှိသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားရောဂါဖြစ်ပွားလာပါကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကျန်းမာရေးကြေငြာချက် QR Code ကိုဖန်တီးပါ
Covid-19 ကြေငြာချက်ပုံစံ QR ကုဒ်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
ဦး စွာ၊ သင်သည် Google Forms တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းပလိတ်များကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်လုပ်လိမ့်မည် တစ် ဦး QR Code ကိုပါစေ တစ် ဦး QR Code ကိုမီးစက် tool ကိုအတူ။ QR Code ကို Google form များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Covid-19 တင်းပလိတ်များကိုဝင်ရောက်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
Covid-19 QR Code ကိုအသုံးပြုမှုအမှုပေါင်း
ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့်အခြားအရာများအတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ နိုင်ငံများစွာသည် Covid-19 ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတောင်းဆိုထားသည်။
သေးငယ်သောနေရာများနှင့်နေရာများတွင် Coronavirus ပြန့်နှံ့မှုကိုတားဆီးပါ။ Self- ကြေငြာပုံစံများသည်ဤအတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အဆက်အသွယ်မရှိအောင် QR ကုဒ်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြေငြာချက် QR Code ကိုသင်၏ဝင်ပေါက်ရှေ့တွင်ပြပါ။ ပုံစံကိုဖြည့်ရန်ည့်သည်များမှဝမ်းမြောက်စွာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
သင်၏ QR Code ကိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။
ပုံစံကိုဖြည့်ပြီးမှသာ visitors ည့်သည်များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါ။
သင်၏အလုပ်သမားများနှင့် visitors ည့်သည်များဘေးကင်းကြောင်းသေချာပါစေ။
Coronavirus QR Code ကိုစစ်ဆေးပါ
Coronavirus QR Code စည်းမျဉ်းများ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရန်နှင့် Covid-19 ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ဖောက်သည်များအားကူညီပါ
COVID QR CODE ပုံစံလုပ်ပါ
မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ လုပ်၍ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Coronavirus QR ကုဒ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံတင်းပလိတ်များကို download လုပ်ပြီးသင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းတည်းဖြတ်ပါ။
#2 QR Code ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ QR Code စတိုင်ရွေးစရာများအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်၏ logo ကို QR Code နှင့်ပုံစံတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
#4 Covid-19 QR ကုဒ်များမည်မျှကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
သင်လိုအပ်သလောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို coronavirus နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးမှုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဒေတာအားလုံး encrypt နှင့်လုံခြုံသည်။
COVID-19 ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Coronavirus ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါ coronavirus ၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Open.edu
COVID-19 အလွန်ကူးစက်လွယ်။ သေစေနိုင်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေသည်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် (SARS-CoV2) ဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဤရောဂါသည် ၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သော Wuhan China မှဖြစ်သည်။
#1 - Coronavirus ရဖို့အသုံးအများဆုံးနည်းကအသက်ရှူခြင်းဖြစ်တယ်။ လူများသည်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်စကားပြောဆိုခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာလူများသည်အနည်းဆုံး ၂ မီတာ (၆ ပေ) အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သောအချက်ဖြစ်သည်။
#2 - အကယ်၍ လူနှစ် ဦး စလုံးမျက်နှာဖုံး ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဆိုပါက Covid-19 ကျုံ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။
#3 - QR ကုဒ်များသည်လူများအားကျန်းမာရေးကြေငြာချက်ပုံစံများကိုအသုံးပြုရန်နှင့်အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ စာရွက်များသို့မဟုတ်ဘောပင်များမလိုအပ်သောကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အလွန်အကျွံကိုအမြဲရှောင်ကြဉ်သည်။
PRO သိကောင်းစရာ - သင်၏ coronavirus QR ကုဒ်များကိုကြေငြာရန်တင်သောအခါ - ၎င်းတို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ရန်နှင့်လူစည်ကားသောနေရာများမတိုင်မှီသေချာပါစေ။
QR ကုဒ် အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစား
မှ Ultimate လမ်းညွှန် QR Code လုပ်ပါ
ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ QR Code & Barcode
အပေါ် QR ကုဒ်များ လက်မှတ်နှင့်ပွဲတော်လက်မှတ်များ